Allgedo.com » Al-Shabaab oo qof rayid ah ku dilay duleedka Baardheere
Home » News » Al-Shabaab oo qof rayid ah ku dilay duleedka Baardheere Print here| By: allgedo.com:
1 Jawaab Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in kooxda Shabaab ay halkaas ku dileen nin reer Miyi ah.
Alla ha unaxariistee Maxamuud Ibraahim Nuur oo kamid ahaa xoola dhaqatada Baardheere ayay toogteen Shabaab.
Inkastoo aan la ogayn sababta ay Marxuumkan Shabaab udileen hadana qaar kamid ah qaraabadiisa ayaa AOL usheegtay in Shabaab ay ninkan oo oday ah ku eedeyeen in uu ujaajuusayay ciidamada dowlada.
Al-Shabaab faah faahin kama aysan bixin dilka Ninkan rayidka ah, waxeyse dilalkan uu qeyb ka yahay dhibaatooyin haysta shacabka Soomaaliyeed.
Al-Shabaab oo qof rayid ah ku dilay duleedka Baardheere " mahad says:	October 31, 2012 at 9:35 pm	Odayaashii Reer Baardheere ee kenya magdhowga ka dalbayey howshaan baa uga horeysa inay tallaabo ka qaadaan oo wax ka qabtaan inta aysan kenya u gudbin.